Properties for Sale in Tamwe - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Properties for Sale in Tamwe
အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်း/ILBC အနီးမှာ Condo......
Ad Number S-10177723
တာေမြ super one အနီး ကားပါကင္ပါ MY Condo တြင္ အခန္းေရာင္းမည္
Ad Number S-10175170
ယုဇနပလာဇာ အနီး လုံးခ်င္းသန႔္ရပ္ကြက္ရွိ ကားပါကင္ပါ ကြန္ဒိုတြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး အလႊာျမင့္...
Ad Number S-10175144
🏬 တာမွေ သမိန်ဗရမ်းလမ်းမကြီးပေါ် တာမွေစျေး ၊ အာယုဆေးရုံအနီး အချက်အချာကျပြီး...
🏬 တာမွေ သမိန်ဗရမ်းလမ...
Ad Number S-10167955
တာမွေ၊ ကျိုက္ကဆံလမ်းမပေါ်ရှိ #ဆိုင်ခန်း_ရုံးခန်းဖွင့်ရန်အဆင်ပြေသော #မြေညီထပ်အခန်းကျယ်...
ကျိုက္ကဆံလမ်းမပေါ်၊ ပျားရည်ကုန်းရပ်ကွက်၊ တာမွေ။ ကျိုက္ကဆ...
Ad Number S-10163555
တာေမြ၊ My Residence (1500Sqft) (၄)လွှာ အရောင်း
တာမွေ၊ My Residence (1500Sqft) MBR-1, BR-2 (ပြင်ပြီး) ...
Ad Number S-10162340
တာမွေ၊ My Residence
တာမွေ၊ My Residence (1500Sqft) MBR-1,BR-2(...
Ad Number S-10161017
Ad Number S-10177674
Ad Number S-10177280
Royal Garden View condo တြင္ အခန္းေရာင္းမည္
Ad Number S-10176024
Ad Number S-10175163
တာေမြ K Residence တြင္ ကြန္ဒိုအခန္းေရာင္းမည္
Ad Number S-10173931
Ad Number S-10173765